Ücretsiz telefon görüşmeleri / टोल फ्री टेलिफोन कलहरू – Diyaloglar | OpenTran
Ücretsiz telefon görüşmeleri / टोल फ्री टेलिफोन कलहरू – Diyaloglar
Çevirmen & Sözlük çevrimiçi Türkçe-nepali çeviri Ücretsiz telefon görüşmeleri / टोल फ्री टेलिफोन कलहरू – Diyaloglar
शिमोन: नमस्ते, ज्याक। तिमीलाई देखेर खुसी लाग्यो। तिमीलाई कस्तो छ?
ज्याक: (उनको अमेरिकी साथी) म ठिक छु। म तिमीलाई देखेर खुसी छु।
शिमोन: तपाईसँग केहि स्पेयर मिनेट छ?
ज्याक: पक्कै पनि, म गर्छु।
शिमोन: तपाईं मलाई बुझाउन सक्नुहुन्न कि यी «800» टेलिफोन नम्बरहरूको अर्थ के हो?
ज्याक: यो एकदम सरल छ, साइमन। असंख्य टेलिफोन नम्बरहरू प्रायः व्यवसाय वा सरकारको to «०० »नम्बरको सरकारसँग सम्बन्धित छ। यी नम्बरहरूले निःशुल्क ग्राहक सेवा प्रदान गर्दछ। धेरै अन्य केसहरूमा कम्पनीहरू नयाँ ग्राहकहरू लिन चासो राख्छन्। यदि तपाईं «800» नम्बर डायल गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको पार्टीले भुक्तानी गर्नेछ।
शिमोन: मँ देख्छु। अर्को पटक म यी टोल-फ्री नम्बरहरूको प्रयोग गर्ने कोसिस गर्दछु।
ज्याक: डायल गर्न नबिर्सनुहोस्: १-8००-टेलिफोन नम्बर। भाग्यले साथ दिओस्।
शिमोन: (सामाजिक सुरक्षा प्रशासन कल गर्दै)
टेप: तपाई सामाजिक सुरक्षा प्रशासनमा पुग्नुभयो। हाम्रा सबै प्रतिनिधिहरू व्यस्त छन्। कृपया होल्ड गर्नुहोस्, र अर्को उपलब्ध प्रतिनिधि तपाईंको साथमा हुनेछ, सकेसम्म चाँडो।
मिलर: यो रोबर्ट मिलर हो। के म तिमीलाई मद्दत गर्न सक्छु?
साइमन: एक घण्टा पहिले, मेरो वालेट चोरी भयो। मेरो सामाजिक सुरक्षा कार्ड यसमा रहेको थियो। म नयाँ कार्ड अर्डर गर्न चाहन्छु।
मिलर: तपाईको कार्ड नम्बर के हो?
शिमोन: नम्बर कति हो?
मिलर: तपाईको नाम र ठेगाना?
साइमन: साइमन चेर्न्याक। १०० मोन्टगोमेरी स्ट्रिट, अपार्टमेन्ट २-ई। जर्सी शहर, न्यू जर्सी 07300।
मिलर: के म तपाईको टेलिफोन नम्बर पाउन सक्छु?
साइमन: (२०१२)7637-२237।
मिलर: हामी तपाईंलाई नयाँ कार्ड पठाउने छौं। तपाईंले यसलाई एक हप्तामा प्राप्त गर्नुहुनेछ।
शिमोन: (एटीमा कल गर्दै)
Kütüphaneci ve Öğrenci Arasında लाइब्रेरियन र विद्यार्थीको बिच
Öğrenciler arasında विद्यार्थीहरूका बीच
Hafta sonu hakkında सप्ताहन्तको बारेमा
Mülakat Sorularına nasıl cevap verilir? साक्षात्कार प्रश्नहरूको उत्तर कसरी दिने
Özgeçmiş Hazırlama पुनःसुरु तयार गर्दै
Çevresel koruma पर्यावरण संरक्षण